Home Wararka Arrinta la qariyey ee looga hadlayo kulanka Farmaajo iyo Amiirka Qatar
Arrinta la qariyey ee looga hadlayo kulanka Farmaajo iyo Amiirka Qatar
Madaxweynaha xilka sii haya ee muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa caawa gaaray magaalada Doha ee dalka Qatar, safar ay shaacisay warbaahinta dowlada Dalkaasi.
Farmaajo iyo wafdigiisa waxaa Garoonka Diyaaradaha ee magaalada Dooxa kusoo dhoweeyay Agaasimaha Waaxda Hab-maamuuska ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Qatar, Ibraahim Yuusuf Fakhro iyo Safiirka dalka Qatar u jooga Soomaaliya Xasan bin Xamza Haashem, Waxaa kaloo garoonka ku sugnaa safiirka Soomaaliya C/risaaq Faarax Cali.
Kulanka ay Berri yeelan doonaan Farmaajo iyo Amiirka dalka Qatar ayaa xogta la helay sheegeysaa in arrinta ugu weyn ee looga hadlayo ay tahay Doorashada Soomaaliya iyo caqabadaha weyn ee ku gadaaman Doorashada iyadoo ay sii laciiftay rajada uu Farmaajo ka qabo in dib loo doorto taasoo looga tusaale qaatay Xildhibaanadii Villa Somalia u soo baxay oo lagu qiyaasay ilaa 21 xildhibaan.
Wakaalada wararka Dalka Qatar ayaa qortay inay ka wadahadli doonaan xiriirka labada dal iyo arrimaha Gobolka, laakiin Madaxtooyada Soomaaliya ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in wadahadalku ku saabsan yahay xiriirka labada dal oo ay ku tilmaantay mid miro dhal ah.
Safarka Farmaajo ee dalka Qatar ayaa yimid xilli xasaasi ah oo Doorashada golaha shacabka ay gabagabo tahay, waxaana Farmaajo uu lacago badan ku bixiyey inuu soo saarto xildhibaanno uu doonayo inay ka caawiyaan dib u doorashadiisa oo dad badan u arkaan mid aan suuragal ahayn.
Previous articleMuxuu Fahad Yasin u diidan yahay Xildhibaan Aamino Maxamed?
Next articleFarmaajo oo bedelay magacacii saxda ahaa ee Jamhuuriyadda
Xildhibaanadii ugu badnaa oo diyaariyay mooshin ka dhan ah Farmaajo
Goobaha lagu gelaayo Imtixaanaadka Dowlada oo la shaaciyay